Etu esi ehichapụ ihe niile WordPress kwuru | Martech Zone
Dika mkparita uka banyere ihe ndi ozo abanyego na nyiwe mgbasa ozi nke ndi mmadu, ikwu okwu banyere usoro ihe omuma dika WordPress abanyela n'ime ntinye aka spam. Ọ bụ ihe nwute n'ezie, ana m enwekarị mmasị isoro ndị na-agụ akwụkwọ m na saịtị m wee zaghachi ha.
Kemgbe ọtụtụ afọ, blackhat backlinking bịara bụrụ ihe juru ebe niile dịka ndị na-ahụ maka ndụmọdụ SEO nwara game ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ. N'ezie, Google jidere ma bulie algọridim ha ntakịrị. Ha rụrụ ọrụ dị egwu nke na backlinks na-adịghị mma anaghị enyere saịtị gị aka, ha ga-eli gị na nsonaazụ ọchụchọ.
Nke ahụ egbochighị ndị na-acha ojii, n'agbanyeghị. Otu atụmatụ na-akpasu iwe iwe nke ha debere kemgbe ọtụtụ afọ bụ ikwu okwu adịgboroja. N'ime sistemụ njikwa ọdịnaya dị ka WordPress, a na-emeghe ihe ndabara na ndabara. Ndị a na-ewu ụlọ na-arụ ọrụ na-akpụ akpụ na ngalaba, chọta ụdị nkọwa, ma tinye okwu na njikọta na saịtị ha na mgbalị ịme egwuregwu ọchụchọ.
Ọ na-akụda mmụọ dị ka onye nwe saịtị. WordPress nwere nnukwu ngwá ọrụ, Akismet, na-enyere aka site na iji netwọkụ nke ndị spammers a kọrọ na itinye akụkọ ndị ahụ na nkwupụta gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ya ma melite saịtị gị site na bọọlụ ndị a, ị ga - ahụ onwe gị na ọtụtụ puku okwu spam… mgbe ụfọdụ n'abali. Ka m na-enyocha ụfọdụ ochie saịtị n'abalị a ma na-eme ka ha ruo oge, achọtara m nke ahụ. Otu n'ime ha nwere ihe karịrị 9,000 spam kwuru!
Gbalị ihichapụ ọtụtụ puku spam na-ekwu otu ibe na otu oge na nchịkwa nchịkwa WordPress na-akụda mmụọ, yabụ - ekele - mmadụ wuru a Ntinye ngwa ngwa nke ahụ bụ aghụghọ.
Etu esi ehichapu ihe niile ma ọ bụ okwu niile na-eche
Chọọ na wụnye Hichapụ All Comments mfe ngwa mgbakwunye. Ozugbo ị gbanyere ngwa mgbakwunye, nhọrọ nhọrọ ga-agbakwunye na menu Ngwaọrụ gị.
Ngwaọrụ> Hichapụ All Comments Mfe
Mgbe m na-akwado ka ị kwado ndabere gị WordPress nchekwa data tupu ekpede a ngwá ọrụ dị ka nke a… e nweghị ụzọ iji nweta ndị a ihe azụ ma ọ bụrụ na ị na mmadụ na-ehichapụ ha niile!
Lee nhọrọ maka ngwa mgbakwunye:
Hichapụ niile jide Comments - ezigbo ụzọ iji debe ezi okwu gị mgbe ị na-ehichapụ ndị ọzọ.
Hichapụ ihe niile - nke a na - ehichapụ okwu ọ bụla na sistemụ gị.
Aga m akwado iji ngwa mgbakwunye a na-anwa imebi nchekwa data gị ozugbo! Ma, ozugbo ịmechara, m ga-akwado ịkwatu ngwa mgbakwunye ka ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị nchịkwa ndị ọzọ wee ghara iji ya mee ihe na-akpachaghị anya.
Tags: spam nkwanye azụspam ọjọọhichapụ ihe niilehichapụ ihe niile kwuru mferue mgbe kwuruwordpress kwuru
Willnye Ga-ewu Weebụsaịtị Gị Ọzọ?